Dubartii maallaqa seeraan ala dabarsuuf turte to'achuuf xiyyaarri sa'aatii 3 balali'e deebi'ee qubate - Oromia Broadcasting Network - OBN
Maallaqa seeraan ala daddabarsuun dubartii shakkamte to’achuudhaaf jecha xiyyaarri sa’aatii sadiif balali’e akka deebi’ee qubatu taasifamu Ministeerri galii beeksiseera.
Ministeerri Galii akka FBC’f ibsetti, dheengadda halkan hojjetaan Daandii Xiyyaara Itoophiyaa mirga sakata’amuu dhabuu isaa fayyadamuudhaan dubartii gara Chaayinaatti imalaa turte tokkotti maallaqa biyyoota gara garaa of keessaa qabu hedduu sarara sakkatta’insaa darbee itti kenne.
Haata’u malee, hojjetoonni Daandii Xiyyaaraa kana arganiifi hojjetoonni gumuruk shaanxaa dubartii gara Chaayinaatti imaltu kanatti kenname kana fuudhuudhaan sakatta’an.
Hojjetoonni Daandii Xiyyaraafi Gumuruuk kun erga waliin shaanxaa sana sakata’anii booda shaanxicha keessa paawondii 6,170 Yuuroo 33,115 birrii Itoophiyaa 1,264,975 arganii hojjetaa kana to’annaa jala oolchan.
Hojjetaan daandii xiyyaaraa kun to’annaa jala oolullee, dubartiin maallaqa kana irraa fuutee gara Chaayinaa deemtu garuu imala ishee eegalte.
Haaluma kanaan, dubartittii to’annaa jala oolchuudhaaf xiyyaara ishee qabatee deeme sana erga sa’aatii 3 balali’ee booda deebi’ee Buufata Xiyyaaraa Boole akka qubatu taasisuun dubartii kana to’anna jala oolchuun danda’ameera.
Total Hits : 53898